कोरोना भाइरसको प्रकोप रोक्न घरेलु औषधि चलाउने की ? Nepalpatra कोरोना भाइरसको प्रकोप रोक्न घरेलु औषधि चलाउने की ?
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले गर्दा आज विश्वको अर्थतन्त्र धरासायी बनाउदै अब विश्वले खोप लगाउदै राहतको श्वास लिन थालेको सन्दर्भमा फेरि यसको हल्ला चल्नु भनेको मेरो विचारमा खोप सफल नभएको त होइन भन्ने सन्देश दिन थालेको छ ।
रोगको रोकथाम गर्न खोप लगाईन्छ तर खोपले रोक्थाम गर्न समय लाग्ने भएकाले भरपर्दो उपचार नहुँदा जनतामा त्रास फैलनु स्वभाविक हो । हामीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग रहेर खानपानमा विषेश ध्यान दिन आवश्यक देखिन थालेको छ ।
स्वास्थ्य हाम्रो सम्पदा हो । आफु स्वस्थ नभए सम्पत्ति हुनु वा नहुनु केहि छैन । हामीले मनोरञ्जन गर्दा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । औषधि हाम्रो वरिपरि छन् मेरो बाबाले सामान्य रूघा खोकी लाग्दा असुरोको पात टिपेर ल्याउनु हुन्थ्यो ।
पातलाई सफा गरेर कपडामा पोको पार्ने र बाहिरबाट रातो माटोले बाक्लो गरि पोत्ने र आगो बालेको खरानी तल गाड्ने रातो भएपछि सेलाएर निचर्ने । निकालेको रस दुई चमच औषधिमा मह एक चमच दिनमा दुई पटक खान दिनु हुन्थ्यो तर अहिले समय परिवर्तन भइसकेकाले औषधि बनाउन सजिलो तरिका अपनाउन सक्नु हुन्छ ।
आज हामीसंग औषधि छ तर अनुसन्धान नहुनाले त्यसै खेर गइरहेको देखिन्छ । हाम्रो गाउँघरमा परम्परादेखि चल्दै आएका घरेलु औषधि प्रयोग हुन सकि रहेको छैन यसलाई म दुर्भाग्य ठान्दछु । यस्ता औषधि प्राय: हानिरहित हुन्छन् ।
यस्ता औषधि अनुभवी व्यक्तिको देख रेखमा चलाउदा ठिक हुन सक्छ भन्ने हाम्रो राय छ । आजको लेखमा मैले भाइरसको सटिक उपचारबारे घरेलु औषधि बताउन गइरहेको छु । यस्ता औषधि सेवन निर्धक्क भएर गर्न सक्नु हुनेछ । असुरो हरेक बारेमा हामीले देख्न सक्छौं ।
यस बारेमा राम्रो जानकारी नहुनाले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । तल मैले औषधि बनाउनेबारे प्रकाश पार्दैछु । यो जडिबुटीको ठाउँ अनुसार नाम फरक हुन सक्छ । यो औषधि सेवन गर्दा दिर्घकालीन रूघा ज्वरो खोकी दम निमोनिया निको बनाउदछ ।
१. असुरोको पात, थोरै अदुवा राखेर ६/७ पिस पातलाई सफा गरेर पकाउनुस र पाकेर काढा तयार भएपछि उतार्नु होस् । काढा सेलाएपछि २ चमच काढामा १ चमच मह राखेर दिनमा २ पटक खाने गरेमा राम्रो फाइदा गर्दछ ।
हाम्रो शरीरका अनावश्यक रौं हटाउने घरेलु उपायहरु